कसरी खराब सफ्टवेयर सामना गर्न (मालवेयर)
इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको संख्या दिन दिन बढ्दै छ। ,, भोजन, औषधी आदेश कुराहरू किन्न एउटा चलचित्र र थप हेर्न - अनलाइन प्रयोगकर्ता लगभग केहि गर्न सक्नुहुन्छ। आक्रमणकारीहरूले प्रयोगकर्ताहरूको कम्प्युटर साक्षरता को प्रयोग र मालवेयर संग कम्प्युटर संक्रमित। धेरै कम्पनीहरु भाइरस को कम्प्युटर सफाई विशेषज्ञ, तर यो एकदम एक महंगा प्रक्रिया हो, त्यसैले कुनै हानि इन्टरनेट को खराब नतिजा भ्रमण गर्न को छुटकारा प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता हुनेछ। सर्वश्रेष्ठ मुक्त विरोधी-भाइरस सफ्टवेयर, साथै धेरै अरूलाई साइटमा निकला विज्ञापन र अन्य असुविधाहरु बिना free-software.com.ua डाउनलोड गर्न सकिन्छ।
सबै को पहिलो, तपाईंले एक प्रत्यक्ष सीडी तयार गर्न आवश्यक छ। यो एक बुटेबल तपाईं लिनक्स सिस्टम र एन्टिभाइरस कुनै कार्यक्रम स्थापित जो मा सीडी-रोम छ। , त्रुटिहरू लागि डिस्क जाँच रजिस्ट्री र अन्य उपयोगिता पुनर्स्थापना - तपाईं एक तयार बनाएको समाधान, अतिरिक्त विकल्प समावेश गरिनेछ जो खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो ड्राइव को सञ्चालनको सिद्धान्त एकदम सरल छ - तपाईं यो डिस्क देखि बुट गर्न, BIOS प्रयोग, ड्राइभ सम्मिलित गर्न कम्प्युटर पुनः सुरु र आवश्यक छ। यो सञ्चालन प्रणाली र एन्टिभाइरस सफ्टवेयर ब्लक स्वतः सुरु कि कार्यक्रम हटाउन अनुमति दिन्छ। ड्राइव कम्प्युटर छैन भने, तपाईंले युएसबी-फ्लैश ड्राइव ( "फ्लैश ड्राइव") मा सिस्टम को छवि कब्जा गर्न सक्छन्। इन्टरनेट, प्रस्ताव धेरै मा, तिनीहरूले मुक्त छन् र अक्सर रेकर्डिङ र प्रयोगमा निर्देशन समावेश गर्नुहोस्। तर यो ड्राइभ अब अन्य डाटा भण्डारण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ भनी उहाँ सम्झनुहुन्छ लायक छ - फ्लैश ड्राइव को छवि बनाउन प्रवेश सुरक्षित गरिनेछ को प्रक्रिया मा, र केवल उपकरणमा पूर्ण मेटाउने डाटा पछि सम्भव छ अन्य उद्देश्यका लागि यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्।
केही आधुनिक कम्प्युटर सुरक्षा प्रणाली सुरक्षित बूट स्थापित। यो उपयोगिता ड्राइव मा स्थित मालवेयर रही जोगाउँछ जो निर्माता, द्वारा पूर्व-स्थापित छ, प्रणाली सुरु। एक हात मा, जब तपाईं पुनः सुरु लिन गर्ने छैन बाहिर फ्लैश ड्राइव कम्प्युटर प्रयोगकर्ता सुरक्षा एक उपयोगी सुविधा छ। तर यो पनि एक प्रत्यक्ष सीडी प्रयोग गरेर सिस्टम ठीक रोक्छ। प्रत्येक निर्माता यसको अल्गोरिदम यो उपकरण असक्षम, त्यसैले त्यहाँ एक निर्देशन छ र इन्टरनेट आफ्नै सिफारिसहरू पाउन आवश्यक छ।
सामान्य मा, मालवेयर तपाईंको कम्प्युटर सफाई को प्रक्रिया एकदम सरल छ र पनि साईट प्रयोगकर्ताका लागि समस्या उत्पन्न गर्दैन - सबै स्वतः हुन्छ। काम पूरा भएपछि, एक सन्देश देखिन्छ, तपाईंले आफ्नो कम्प्युटर फेरि सुरु गर्न र हार्ड ड्राइभ बाट बुट गर्न BIOS चयन गर्न आवश्यक हुनेछ।
चालु समय समयमा संदिग्ध साइटहरु भ्रमण र प्रयोग गर्नु अघि प्रत्येक USB फ्लैश ड्राइव जाँच सफाई, द्रुत विरोधी-भाइरस सफ्टवेयर अद्यावधिक - यी अपरेसन को सादगी तापनि यसलाई प्राथमिकता संक्रमण बाट सुरक्षाको निवारक उपाय गर्न दिन लायक छ।
यो भिडियो वा तस्वीर कसरी कटौती गर्ने?
कसरी प्ले बजार अद्यावधिक गर्ने?
फोटो को आकार कसरी कम गर्न
कसरी Photoshop मा फोटो सम्हाल्न: शुरुआती लागि निर्देशन
स्कोडा Felicia - अर्थव्यवस्था वर्ग को एक विश्वसनीय कार
अर्थतन्त्रको अवस्था विनियमन को एक उपकरण रूपमा संकेत योजना
Harry Potter - सबैभन्दा लोकप्रिय किशोर विश्व मा! त्यसैले जसलाई मा उहाँले आफ्नो अभिनेता Deniel Redkliff कार्य प्ले?
को जाडो नवजात लागि आवश्यक वस्त्र
परिशिष्ट "Yule": प्रयोगकर्ता प्रतिक्रिया, सञ्चालन सिद्धान्त, फाइदा र बेफाइदा
कार मा संगीत को स्थापना - जीवन धेरै रमाइलो बनाउन
कसरी क्लासिक कान तयार रुचि छ? यस नुस्खा सरल छ
एक सामाजिक घटना राजनीति: शक्ति सम्बन्धमा सम्बन्ध
कसरी पैसा मा "घेरा" मा धोखा प्रयोग गर्ने?
वसापुरीष - यो ... वसापुरीष: लक्षण, गराउँछ, निदान र उपचार